Global Voices teny Malagasy » Britney Spears Miozolomana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Novambra 2018 18:13 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Israely, Maraoka, Fivavahana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mozika
Satria tsy ampy ny tabataban'ny media manodidina azy, ny vaovao farany dia hoe mihevitra hivadika ho Silamo  i Britney Spears  mba hanambady ilay sakaizany paparazzo teratany Pakistaney, Adnan Ghalib . Tsy tana fa niresaka momba izany ireo bilaogera Afovoany Atsinanana sy Afrikana Avaratra.
Alarabiya.net nitatitra ny tantara  tamin'ny Alahady ary nahazo fanehoan-kevitra efa ho 100. Mpamaky iray niahiahy:
Avy amin'i Isiraely, namehy ity fanehoan-kevitra ity ny The Elder of Zion mamintina izay lazainy amin'ny lohateny hoe “Britney anaty Burqa? “:
Mpaneho hevitra Umm Layth  avy any Frantsa mivavaka ho an'i Britney:
Saingy Sabdi2  avy any Etazonia kosa manontany raha Silamo i Adnan Ghalib:
Ny fotoana ihany no hilaza raha marina ity tantara ity, tsy maintsy miombon-kevitra amin'ny Egyptian Chronicles  aho.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/20/130584/
 mihevitra hivadika ho Silamo: http://www.answers.com/Britney+Spears?cat=entertainment
 Britney Spears: http://timesofindia.indiatimes.com/International_Buzz/Britney_to_convert_to_Islam_now/articleshow/2701003.cms
 nitatitra ny tantara: http://www.alarabiya.net/articles/2008/01/13/44165.html
 tsy dia faly : http://www.lailalalami.com/blog/archives/004959.html#004959
 maniry ireo media mba tsy hanelingelina an'i Britney:: http://egyptianchronicles.blogspot.com/2008/01/stop-this-britney-and-adnan-media.html
 Britney anaty Burqa?: http://www.israellycool.com/2008/01/14/britney-in-a-burqa/